အမြဲတမ်းပြင်နေရသည် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမျာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမြဲတမ်းပြင်နေရသည် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမျာ…
အမြဲတမ်းပြင်နေရသည် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမျာ…
Posted by zaymdy on Aug 18, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ပျက်အစဉ်ပြင်ခန .. နေတိုင်းလည်း ပြင်သည် နှစ်တိုင်းလည်း ပြင်သည် ပြင်တိုင်းလည်း မကောင်းနောက်ဆုံး ပြည်သူဘက်ဂျက်များ ကုန်..
ချမ်းသာတဲ.သူကချမ်းသာ.. ရန်ကုန်မြို. ပလက်ဖောင်းတွေ.ကတော. ဒီတိုင်း .. ပြောလို.တောင် မဆုံးသေးပါဘူး ဒီနှစ်လည်း ထက်ပြင်ပြန်ပြီး ပလက်ဖောင်းတွေ. သဲ ကျောက်စရစ် အနည်းငယ် (မြင်ကောင်းအောင်) ထည်.ဘိလပ်မြေထည်. ပြင်သည် ဒီထက်ကောင်းတယ် အစီအစဉ်များ မရှိတော.ဘူးလားလို. ရန်ကုန် မြိုတော်စည်ပင်ကို မေးချင်သည်..
zay zay has written9post in this Website..
My name is MyoGyi Nice too meet you All Friend .
View all posts by zaymdy →
အန်ကယ်ကြီးမှန်အောင်ပြောနိုင်တယ် .. တစ်မှတ်
အန်ကယ်ကြီးကတော့လေ ငတ်မှာကြောက်နေတယ်ပေါ့။ဒီလို ဘဲပေါ့ ပျက်အစဉ်ပြင်ခဏ ပါတဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှိတယ်လေ။ပြင်လည်းခဏဘဲခံမှာလေ။သိပ်မကြာဘူးထပ်ပျက်မှာဆိုတဲ့သဘောပါ. ဟိ ဟိ
ဒန်ပေါက်ကြီးဘဲစားမနေနဲ့ ၊ သွေးတိုးနေအုံးမယ်…..
အမြဲတမ်းပြင်နေရသည့် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းများ…
ဆိုတော့ လမ်းတွေတော့ ကောင်းပုံရတယ်။
ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး.. ပြောရင် အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ်….
ပလပ်ဖောင်းမကောင်း လမ်းပေါ်တက်လျှောက်.. ကားတိုက်ရင် ကိုယ်ဖြစ်ကိုခံ…
ရေကြီးရင် မြောင်းပေါက် ကျွံမကျအောင် ဂရုစိုက် ကားလမ်းပေါ်တက်လျှောက်…
ွှအဲဒါပြောချင်နေတာတော်တော်ကြာပြီ အချက်အလက်မစုံလို့မပြောဖြစ်တာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုတင်ချင်တာ
သူတိုရှေ့သွားပြီးရိုက်ရင် တော်ကြာ အုတ်ခဲနဲလှမ်းထုမှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ်ဗျ
Civil မှာဒီလိုလမ်း (ပလက်ဖောင်း) ခင်းနည်းတခါမှ မသင်ဖူးပါဘူးဗျာ စည်ပင်ရောက်မှ သင်ရတယ်ထင်ပ
သဲချည်းပဲ ၄လက်မလောက် ခင်းတယ် အပေါ်ကနေ လမ်းခင်းကျောက်ပြားကိုအသာလေးတင်တယ် ဘိလပ်မြေနည်းနည်းနဲ့ဆက်လိုက်တယ် ဒါဘဲ မိုးလည်းရွာရော အောက်ကသဲတွေပါသွားပြီတော့ အပေါ်ကကျောက်ပြားတွေ ကျွံကျတော့တာဘဲ
ဟိုနေ့က ခလေးတယောက် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ လဲကျတယ် တော်ရုံနဲပြန်ထမလာဘူး သွားထူတော့ နဖူမှာနည်းတဲ့ ကြက်ဥကြီးမဟုတ်ဘူး ချက်ချင်ဖြစ်သွားတာ အဲဒါနဲ သူလဲကျတဲ့နေရာ ကြည်လိုက်တော လမ်းခင်းကျောက်ပြားက အပေါ်ကိုငေါ့ထွက်နေတာတွေ့တယ် ပလက်ဖောင်းညီရင် ခလေး ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီလိုပြင်လို့ကို ကို့ရို့ ကားယားဖြစ်နေတာ … ပလက်ဖောင်းပြင်တော့ လူတွေ လမ်းမဆင်းလျှောက်တယ် … လမ်းမပေါ်က ကားတွေ ကလည်း စေတနာပရပွနဲ့ … လူသွားလာဖို့ နေရာချန်ပြီး လမ်းလည်ခေါင် တက် ပါကင်ထိုးတယ် … အဲ့ဒါတွေများလာလို့ … ကားဂျမ်းဖြစ်တာ … ရုံးနောက်ကျတာ … မှတ်တိုင်မှာ ကားလာနည်းလို့ … လူတွေ အလုယှက်တက်ရတာ … ကားတိုးစီးရတာ … အကြောင်းနဲ့ အကျိုး .. အကုန်ဆက်စပ်နေတယ် … ဟင့် ….
စားထားတာ ကုန်တော့ ထပ်ပြင်တာပေါ့။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ ဈေးသည်တွေ နေရာကောင်းကောင်းမှာ ရောင်းလို့ရအောင် ပလက်ဖောင်းပြင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့။
အမြဲတမ်း ပြင်ပေးနေတာကိုပဲ အပြစ်လုပ်နေတာပဲ..။ မပြင်ပဲထားလိုက်ရ ဟင်းးးးးးးးးးး
ပို့စ် စာတွေ.အများကြီးတင်ချင်ပါတယ်.. … သိုသော် ဓါတ်ပုံတွေ.လည်း တင်ချင်ပါတယ် .သို.သော် အဖက်ဖက်ကို ထောက်ထားသဖြင်. (ဥပမာ naywooni cobra) နောက်နောင်တွင် ဒီထပ်ကောင်းအောင် တင်ပြပါမည် ခင်ဗျာ..